Sosona ozona: nanatsara ny habakabaka ny Covid-19 | NewsMada
Manimba, mampanify ny hatevin’ny sosona ôzôna eny amin’ny habakabaka ny fiharian’ny olombelona. Nisy fihatsarany ny fihibohana vokatry ny tranga Covid-19 satria nihena ny fiparitahan’ny entona karbona manimba ny sosona ôzôna.
Miaro ny haibolan-tany amin’ny hafanana avy amin’ny masoandro ny sosona ozôna.
Tandindomin-doza amin’izao fotoana izao ny haibolan-tany, indrindra tato anatin’ny taonjato roa farany, ity sosona ity, satria niroborobo ny famokarana indostria, mamoaka entona karbôna (CO2), ampian’ny fitrandrahana ny zavamaniry ka mampanify ny hateviny ary mampiakatra ny maripana eto an-tany.
Nilaza ny teknisiana ao amin’ny Birao nasionaly ny Ozôna (BNO), i Nandrasana Mamy, fa miverina tsikelikely, mihatsara ny sosona ôzôna eto amintsika amin’izao vanim-potoana hisian’ny tranga Covid-19 izao. Antony, nihena ny famokarana indostrialy sy ny fifamoivoizana satria maro ny fiara tsy nivezivezy ka nihena koa ny fampiasana solika, mamoaka etona karbona. Nihena koa ny doro tanety nandritra izay fihibohana izay.
Omaly 16 septambra ny Andro iraisam-pirenena hiarovana ny sosona ôzôna, napetraky ny firenena Mikambana. Lohahevitra noraisina ny hoe : “Ozôna ho an’ny fiainana”. Nampiavaka ity fotoana ity koa ny faha-35 taona ny nankalazana ny Andron’ny ozôna.
Foanana ny fampiasana ny HCFC
Manampy izany, mitohy ny fanafoanana tsikelikely ny fampiasana ny fitaovana na kojakoja ahitana ny etona HCFC (Hydrochlorofluorocarbures). Etona anisan’ny manimba ny sosona ozôna koa ity. Nanomboka ny taona 2010 ny ezaka nanafoanana ny fampiasana azy tsikelikely. Efa Manodidina ny 35% ny taha tsy ahitana azy amin’izao fotoana izao ka tanjona ho 65% amin’ny taona 2025. Nanolotra fitaovana “climatiseur” miisa 38 ny Sampana firenena Mikambana hampandrosoana ny indostria (Onudi), omaly, miaraka amin’ny kojakoja mandeha amin’ny etona R290. Mitsitsy angovo ireo fitaovana ireo, mihena hatrany amin’ny 20%. Haparitaka eto Analamanga sy Vakinankaratra izy ireo.